Ahoana no ahafahanao mahazo tombony amin'ny fametrahana ny lahatahiry backlink?
Ity lahatsoratra ity dia mety ho an'ireo izay mitady lisitra sy toerana ahafahan'izy ireo manolotra ny bilaoginy. Manomana lisitra manokana ho anao aho, izay mety hahasoa ny fanentanana fananganana rohy. Noho izany, raha tsy nanolotra ny loharano ho an'ireny tatitra ireny ianao, tokony hanatsara ity toe-javatra ity ary hamorona iray. Andeha hojerentsika akaiky ireo mpitatitra ireo.
Aiza ny fanoratana ny blôginao?
Te hanomboka ity lisitra ity miaraka amin'ny fitaovana webmaster aho satria io no fomba tsara indrindra ahafahanao manamboatra tranokalanao. Amin'ny fandefasana ny blôginao na tranokala, dia avelao hitady bots amin'ny endriny tsara kokoa ny tranonkalanao ianao ary hanome anao toerana ambony ao amin'ny pejy valin'ny fikarohana. Na dia misy ny torolàlana sasantsasany izay tena ilaina aza, ary mety hampidirinao ny rohinao eo mba hanamarinana vokatra iray.
Ity fitaovana ity dia natao hanamora ny zavatra ho an'ny webmaster sy tompona tranonkala. Mety tsy hampidirinao ao amin'ny rafitra Google fotsiny ny tranonkalanao fa alefaso ihany koa ny sitemap anao. Raha manao izany ianao, dia ho azonao antoka fa afaka mikaroka ny rohy rehetra ao amin'ny tranonkalanao Google ianao ary manindry azy ireo, ka manome toerana ambony kokoa ny tranokalanao. Ny soa iray fanampiny amin'ity fitaovana ity dia ny mety ho fitaovana SEO maimaim-poana amin'ny tranokalanao.
Raha mamorona fampahalalam-baovao mahazatra ara-tsosialy amin'ny tambajotra sosialy ianao, dia ho afaka hahazo traikefa sarobidy eo amin'ny sehatra fototra anao amin'ny alàlan'ny sehatra media sosialy. Mba hampidirana ny tranokalanao any amin'ny Facebook dia mila mamorona ny kaonty fandraharahanao ianao eto. Misy karazana fahafahana maro ho an'ny orinasa ao amin'ny Facebook, toy ny Pixel, dokam-barotra, sy ny sisa.
Maro ireo tompona tranonkala no manamaivana ny sandan'ny sehatra Google. Na izany aza, raha manaiky izany ianao, dia lasa miseho kokoa ao amin'ny Google ary manomboka mahazo trafikana misimisy kokoa any amin'ny faritra misy anao.
Google Analytics dia tsy toerana tsotra handefasana ny tranokalanao na bilaogy. Na izany aza, tsy misy ianao raha tsy misy an'ity fitaovana ity raha tianao hampiroborobo ny marikao an-tserasera. Manampy ny manara-maso ny antontan'isa ao amin'ny tranonkalany izany ary manome anao ny lanjany lehibe rehetra ilainao hanarahana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra SEO. Ny ampahany tsara indrindra amin'izany dia ny fitaovana maimaim-poana izay azon'ny mpamorona tranonkala manerana izao tontolo izao.
Pinterest dia sehatra media malaza izay mifototra amin'ny votoaty. Rehefa manolotra ny blôginao amin'ny Pinterest ianao ary manamarina ny mombamomba anao, dia mahazo ny backlinks maimaimpoana maimaim-poana ianao, eo ambanin'ny fepetra nomenao ny mpiserasera. Ankoatra izany, ny lisitry ny backlink dia hanampy anao hanatsara ny fanentanana ny marika ary hahasarika ny mpanjifa mety ho an'ny marikao.
Ity lahatahiry backlink ity dia mahasoa amin'ny sehatra mahazatra taloha izay manana fahefana amin'ny mpampiasa. Tena sehatra tena mahasoa sy mahasoa izy io raha afaka manatsara ny tranokalanao Source .